ဆူ ညံနေ တဲ့ ည တစ် ည – Grab Love Story
ဆူ ညံနေ တဲ့ ည တစ် ည
by phyu June 24, 2021
လယ်ပိုင်ရှင် ကြီး ဦးတင် ရဲ့ အလုပ်သမား။ အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီ။မိဘ ဆွေမျိုးမရှိ သော တ ကောင်ကြွက်။ ရွယ်တူကောင် မ လေးတွေက သူ့ ကို စိတ်မဝင် စား။သူကလည်း အနိမ့်စားမို့ဘယ်သူ့ မှ မမှန်းဝံ့။ သို့ သော် အချိန်တန်တော့ သဘာဝဟာ သဘာဝ ပါ။သူ ဗွီဒီယို အပြာကားကြည့်ချင် သည်။ကြိုက်သည်။ မြို့ပြန် တက်ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုကိုအောင် က ဖုန်းထဲက ကားတွေသူ့ ကိုပြသည်။ သူက ကို အောင့် အတွက် အရက် သွားဝယ်ပေးရ သည်။ အိုကေ ပေါ့။ သည်လိုနဲ့ သူ လက်တွေ့လုပ်ချင် လာသည်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ ရွာမှာ ဖာသည် မရှိ။ မြို့တက်လုပ် ရ အောင် လည်း ဘသူက လိုက်ပို့ မလဲ။မတတ်နိုင်။ ကံပေါ့။ တ နေ့ဦးတင် အိမ်သို့ မြို့က အ ဒေါ်ကြီး တ ယောက် လာ၏။ အထည်ဆန်းတွေ စပါးနဲ့လာလဲ တာဖြစ်သည်။ အသက် ၅၀ ကျော်ဆိုပေမဲ့ မြို့သူ ဆိုတော့ နုသည်။ ၃၀ ကျော် အပျိုကြီးလား ထင် ရသည်။ သို့ သော် အပျိုကြီးမဟုတ်။ သမီးတောင် လင် ရ ပြီတဲ့။ ထို အ ဒေါ် ( အန်တီ ) ကြီး ရေချိုးစရာ ပေါက်စ ခပ်ထည့်ပေးရသည်။
ရေထမ်း ထည့်ရင်း အန်တီ ကြီးရေချိုးတာ တစွန်းတစ သူ ခိုးကြည့်သည်။ ဖွေးနေတာဘဲ။ ရင်လျားအထက်က ရင် အ ပေါ်ပိုင်းတွေ ကြွတက် နေတုန်း။ ခါးတွေ တင် တွေ တင်းတုန်းဘဲဖြစ်၏။ ပေါက်စ အာရုံရသည်။ ကောင် မကြီးကို သူ လုပ်ချင်လှ သည်။ သို့ သော် မည်သို့ ဖြစ် နိုင် မှာလဲ။ ဟိုဟာမကြီးက သူ့ ကို ရှိသည် ဟုတောင် ထင် ပုံ မရ။ အော် ဆိုးလိုက်တဲ့ ဘဝ။ ရွာ အ ရှေ့ပိုင်း အလှူည။ ပေါက်စ ဆိုင်းနားထောင် ပြန်လာတော့ ဦးတင် တို့ အိပ်ကြပြီ။ နောက်ဖေး စပါးကျီတဲ အဖီလေးထဲ ပေါက်စ သွား မအိပ် ခင် အိမ်ထဲကို အကဲခတ် တော့ အန်တီ ကြီး အိမ်ဦးခန်း မှာ အိပ်နေတာ တွေ့သည်။ ခြင် ထောင်ပါးလေးထဲမှာ အန်တီ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက တတုံးတခဲ။ ပေါက်စ သူ့ နေရာသူ ပြန်အိပ်သည်။ အိပ်မ ပျော်။ ဆိုင်းသံ အသံချဲ့စက်သံတွေကလည်း ဆူညံလှ၏။ စိတ်တွေက ကိုအောင့် အပြာကားတွေထဲ ရောက် လိုက် အန်တီကြီးဆီ ရောက်လိုက်။ တောက် ! ဆော်ချင် လိုက်တာ။ နားထဲမှာ မုဆိုးဖို ကြာကူလီ ကိုသိန်းပြောတာ ကြားမိလာသည်။ ပိုင် မပိုင် မ သေချာတဲ့ ကောင် မ တွေကို နှိုက် ရင် တရွာလုံး ဆူညံနေတဲ့ ညမျိုးကို ရွေးနှိုက်ကွ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သ ဘောမတူလို့ အော် ရင်တောင် ရုတ်တရက် ဘသူမှ မသိဘူးတဲ့။ သူ့ စကားက ပေါက်စကို အားပေးလိုက်သလိုဘဲ။ ပေါက်စ အိပ် နေရာက ပြန်ထ သည်။ထို့ နောက် အန်တီကြီး ခြင် ထောင် ဆီ တိတ်တဆိတ် ထွက် သွားပါတော့၏။ အန်တီကြီး အခန်းထဲဝင် ကုတင်ခြေရင်းရောက်မှ ပေါက်စ ကြောက်နေသည်။
ဘယ့်နှယ် စ ရမလဲ။အ တွေ့အကြုံကမရှိ။ ကြာကူလီကြီးကို မ မေးခဲ့မိတာ မှားသည်။ သူ တွေဝေ နေ၏။ပြန်လှဲ့တာ ကောင်းမယ်ထင် တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခြင်ထောင် ထဲက ဟာမကြီးကလည်း လုပ်ချင် စရာ။ နို့ကြီးတွေ နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်နဲ့ အိပ်ပျော် နေသည်။ပေါက်စ ကြောက်သော်လဲ ခြေ ထောက်တွေက ကုတင်ဘေးဆီ အလိုလို လှမ်းမိ ကပ်မိ၏။ ခြင်ထောင် အသာ မသည်။လက် တဘက် အသာလျိုသွင်းသည်။ နောက် ကောင် မကြီးရဲ့နို့အုံကြီးတွေကို တအား ဆုပ် ညှစ်လိုက်၏။ အောင် မ လေးတော့ ! အန်တီကြီး လန့် အော်သည်။ ဟဲ့ မောင် တင်။ လာပါဦး။ ဒီမှာ ဘာလဲမသိဘူး။ ကယ်ပါဦး။ ဟိုက် ! ငါးပါးတော့ မှောက်ပြီ။ ပေါက်စ ပြန်ပြေးမယ် အလုပ် အိမ်ထဲက ဦးတင် ပြေးထွက်လာသည်။ လက်နှိပ်မီးနဲ့ လှမ်းထိုးတော့ ဒဲ့တိုးနေ၏။ သူ ပြေးမရ တော့။ သွားပြီ။မှားပြီ ။ အလုပ်ရှင် တမိသားစု လုံး အန်တီကြီး အခန်းထဲ ရောက်လာကြ၏။ မီးလည်း ထွန်းလိုက်ပြီ။ င ပေါက်စ အခန်းထောင့်မှာ ကုပ်ကုပ်လေး။ သူ့ အလုပ် ရှင် ဦးတင် က ငှက်ကြီးတောင် ဓား ကိုင် လျက် အန်တီကြီးကိုမေး၏။ ပြော ။ အစ်မ ဘာဖြစ်တာလဲ။ အန်တီကြီးက ပေါက်စဆီ လှမ်းကြည့် အကဲခတ်ပြီး စဉ်းစား ဖြေတယ်။ ဟို သူငယ်က မင့်အလုပ်သမားလား။ သူ ဟိုစားပွဲပေါ်က တခုခု လာယူတယ်နဲ့ တူပါရဲ့။ အဲဒါ ချလွတ် ချလွတ် အသံကြားတော့ ငါက တ စ္ဆေ ချောက်တာ မှတ်ပြီး လန့် အော်လိုက်မိ တာ တဲ့။ ဦးတင် က ပေါက်စ ကို မေးတယ်။ ပြောစမ်း ။ မင်းက ဘာလာယူတာတုန်း ။ ပေါက်စ တွေ့ကရာ ဖြေချလိုက်တယ်။ အဲ အဝှာ ဦးဇင်းလေးပေးထားတဲ့ ချဲ ဂဏန်း စာ ရွက်။ ဒီအပတ် အပီ တဲ့။ အားလုံး တဟားဟား ရယ်ကြပါသည်။
ကဲ မမ ။ စိတ်ချ လက်ချ အိပ်တော့။ ကျုပ်အိမ်မှာ မမ အတွက် ဘာ ကြောက်စရာမှ မရှိဘူး။ ဟုတ်ပြီလား။ ပေါက်စ သူ့ တဲ လေးထဲ ပြန်အိပ်တယ်။ ဘုရား ဘုရား။ ဟို ကျေးဇူးရှင် သူတော်ကောင်းမ ကြီး ကယ်ပေလို့ ပေါ့။ မဟုတ် ရင် ငါ ထောင် ကျ တော့မယ်။ ပေါက်စ နောင် တ တွေ ရ ၊ နောက် ဘယ်တော့ မှ မဟုတ် တရုပ် မလုပ်တော့ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အိပ်တော့သည်။ ၁ နာရီလောက်အကြာ တရွာလုံး အိပ်မောကျ။ ဘာ သံမှ မကြားရ တော့မှ ပေါက်စ လန့် နိုး၏။ အ ကြောင်းမှာ သူ့ ကို တ ယောက်ယောက်က ပုခုံးလှုပ် လာနှိုး၍ ဖြစ်ပါသည်။ သူက လက်နှိပ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်တော့ အန်တီကြီး။ ဟ ။ ဘယ်လိုလဲ။ အန်တီကြီးက သူ့ ခုတင်ပေါ် တက် သူနဲ့ပူးကပ် ထိုင် ပြီး ခ လေးရယ် ။ မမကို ချစ်လို့ခြင်ထောင် ထဲ လာ တွေ့မယ် ဆိုရင် လည်း ကြိုတင်ပြီး အထာလေး ပေးဦးမှပေါ့။ အခု မင့်လုပ်ပုံက ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်။ မမဖြင့် လန့် သွားတာဘဲကွာ တဲ့။ အော် ! ဂလိုကိုး။ ပေါက်စ နားလည်လိုက်ပြီ။ ဖြစ်မှ ဖြစ် ရပ လေ။ ပေါက်စ ကောင် မကြီးကို အတင်းဖက် နမ်း၏။ အ လောတကြီး အင်္ကျီဆွဲ ချွတ်တော့ ကြယ်သီး တွေ ပြုတ်ထွက် ကုန်သည်။ အန်တီကြီးက ဟာကွာ ပြောရင်းဆိုရင်း ကြမ်းပြန်ပြီ။ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ မောင်လေးရယ်။ မမက မင့် သ ဘောကျ လိုက်လျောမှာပါကွ။ စော်ကြီးက အားလုံးချွတ်သည်။
ထို့ နောက် ပေါက်စ ပုဆိုး အင်္ကျီတွေလည်း ယုယု ယယ ချွတ်ပေး၏။ ပေါက်စ ပေါင်ကြား နှိုက် ကာ အ ချောင်းကို ကိုင် ပေးသည်။ ပြီးတော့ ငုံ့ စုပ်သည်။အရင်းက အဖျား အဖျားကအရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် စုပ်တော့ ပေါက်စ တွန့် လိမ်ချေ၏။ အား မမ ။ မလုပ် နဲ့တော့။ ပြီးသွားလိမ့်မယ်။ ပေါက်စက ရုန်း၏။ နောက် စော်ကြီးကို တွန်းလှဲကာ နို့ကြီးတွေ ဆုပ် နယ်ကိုင် သည်။ စို့ သည်။ အသီးဖျားလေးကို လျှာနဲ့ က လောက်လိုက်။ အေး အဲလိုလေး ဟု စော်ကြီးက သင် သည်။ နှစ်ယာက်လုံး ဖီးတက် တော့ ပေါက်စကို စော်ကြီး က ကိုယ်ပေါ် ဆွဲတင် သည်။ ပေါင်အိအိကြီးတွေ ကားမြှောက်၍ သူမရဲ့မို့ ဖောင်းနေတဲ့ ဟာကြီးထဲ ပေါက်စဟာကို ကျကျနန ထည့်ပေးလိုက်သည်။ အားပါး ကောင်းလိုက်တာ။ ပေါက်စ ခံစားဖူးပြီ။ ဗွီဒီယို ကြည့် ရ တဲ့အရသာနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက် ပါလား။ ပေါက်စက အန်တီကြီးကို စိတ်ကြိုက် သမ ရင်း အန်တီကြီး အ ဖောင်းလေးထဲ သူ့ ညီုတုတ်တုတ် အ ချောင်း မြုပ်ကနဲ ဝင် သွားတာ ထွက်လာတာ ကို ငုံ့ကြည့်မိတယ်။ ဖီးတွေ စွတ်တက်လာပြီး ဆယ် မိနစ်တောင် မကြာဘဲ ပြီးသွားသည်။
နှမြောလွန်းလို့ တောက်ခေါက်တော့ ကောင် မ ကြီးက ရယ်၏။ ခနနားပြီးတော့ ပေါက်စဟာကို သေချာကိုင် ဆွ ပေးပြန်သည်။ သူမရဲ့နို့အုံထွားထွားကြီးတွေကြား ပေါက်စဟာကို သွင်း ပြီး ပွတ်တိုက်ပေးသည်။ ပေါက်စ က လူငယ်ဆိုတော့ ချက်ချင်း စိတ်ထ လာပြန်၏။ ဒုတိယအကြိမ်တော့ စော်ကြီးက အ ပေါ်က တက်သည်။ ပေါက်စကို ငြိမ်ငြိမ် နေခိုင်းကာ သူမ စိတ်ကြိုက် လုပ်လေသည်။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ကြွချီ ထိုင်ချီ လုပ်သည်။ ထိုင် ချ တော့လည်း ပေါက်စကို နာအောင် မဖိ ။ အရသာ အပျက်မခံ။ ပေါက်စကလည်း အောက် က နေ နို့ကြီးတွေ တပြွတ်ပြွတ် လှမ်းစို့ သည်။ ဖင်ကြီး လည်းအား ရ ပါးရ ကိုင် သည်။ သိပ်တောင် မကြာ ပေါက်စပြီးချင်ပြန်၏။ နို့တွေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း စွတ်ဆွဲ သည်။စော်ကြီးဟာထဲ အောက် က နေ ပြန်ပင့် ဆောင့် သွင်းတာ မြန်လာသည်။စော်ကြီးက ရီပ်မိတော့ သူမလည်း ပြိုင် တူပြီးအောင် အမြန်ကြိုးစားပါတော့ သည်။ အာ့း့ ကောင်းလိုက်တာ ငယ်လေးရယ် ။ အ့့ အ့့ သိပ်ချစ်တယ်။ ဆောင့်ဦ့း့ ဆောင့်ပါဦး ဆိုတာတွေ တတွတ်တွတ် ရွတ် ရင်း ပေါက်စ အ ပေါ် စော်ကြီး တကိုယ်လုံး ပျော့ကျလာပါ လေ တော့သည်
ဒို့ က အ အို ပါနော်